कुनै कोडिंग स्किल्स नभएको मौसम आधारित अभियान कसरी छिटो शुरू गर्ने Martech Zone
ब्ल्याक फ्राइडे बिक्री पछि, क्रिसमस शपिंग उन्माद, र क्रिसमस पछिको बिक्रीले हामीलाई फेरी फेला पारेको छ फेरि वर्षको सबैभन्दा बोरिंग बिक्री मौसममा - यो चिसो, खैरो, वर्षा र हिउँ परिरहेको छ। शपिंग मल्ल वरिपरि घुम्नु भन्दा मानिसहरू घरैमा बसिरहेका छन्।
2010 अध्ययन अर्थशास्त्री, काइल बी मरेले, सूर्यको किरणको संपर्कले उपभोग र खर्च गर्ने हाम्रो सम्भावना बढाउन सक्छ भनेर पत्ता लगाए। त्यसरी नै जब यो बादल र चिसो हुन्छ, खर्च गर्ने हाम्रो सम्भावना घट्छ। यसबाहेक, धेरै देशहरूमा रेष्टुरेन्टहरू, बारहरू, र शपिंग मल्लहरू सरकारी प्रतिबन्धका कारण बन्द छन्। सबैमा पनि, पूर्वानुमान एकदम आशाजनक देखिँदैन।
तपाईं कसरी खरानी र बोरिंग जाडो २०२१ को मौसममा तपाईंको बिक्री बढाउन सक्नुहुन्छ? एउटा राम्रो रणनीति भनेको खास गरी खराब मौसम दिनहरूमा तपाईंको श्रोतालाई निजीकृत, प्रासंगिक सन्देशहरूको साथ खरीद गर्न प्रेरित गर्नुहोस्। चिसो, जाडो दिनमा, तपाईं मौसम-आधारित अभियानहरू सुरू गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको ग्राहकहरूलाई थप खर्च गर्न प्रोत्साहित गर्दछ - कुपन कोडबाट कुनै पनि कुरा, निःशुल्क ढुवानी, गिफ्ट कार्डमा फ्रीबी वा अतिरिक्त वफादारी पोइन्टहरू राख्नु भए पछि प्राप्त आदेश। उत्तम लाग्दछ, तर कसरी ती ग्राहकहरूलाई लक्षित गर्ने जसको मौसम पूर्वानुमानले केही सर्तहरू पूरा गर्दछ?
मौसम बजार के हो?
मौसम मार्केटिंग (मौसम पनि आधारित मार्केटिंग वा मौसम ट्रिगर मार्केटिंग) शक्तिशाली मार्केटिंग अटोमेसन हो जुन वास्तविक समयको मौसम डाटालाई विज्ञापनहरू ट्रिगर गर्न र स्थानीय मौसमको आधारमा मार्केटिंग सन्देशहरूलाई निजीकृत गर्न प्रयोग गर्दछ।
यो मौसममा आधारित अभियान सुरू गर्न जटिल र समय खपत लाग्न सक्छ तर भाग्यशाली सास, एपीआई-प्रथम समाधानले छिटो र मध्यम आकारका व्यवसायहरूको लागि छिटो समय बजारमा र कम बजेट समाधानहरू प्रदान गर्न सक्छ।
यस जाडोमा व्यवसायलाई मद्दत गर्न हामी, मा भउचरिफाई गर्नुहोस्, एक प्रयोग केस र प्रेरणा को लागी एक कम कोड मौसम विपणन अभियान को एक ट्यूटोरियल तैयार गरेको छ। हामीले परिदृश्यहरूमा केन्द्रित छौं जुन केही दिन भित्र सेटअप गर्न सकिन्छ तपाईंलाई अझै यो मौसममा प्रयोग गर्न दिनुहोस्। हामीले एउटा प्रयोग गरेका छौं र दुबै, ग्लोबल र स्थानीय मौसम-आधारित कूपन र उपहार कार्ड अभियानहरू सेट अप गरेका छन, थोरै कोड प्रयोग नगरी, API एपीआई-प्रथम प्लेटफर्मको प्रयोगको साथ। सेट अपले केहि घण्टा लिए, विचार कदम सहित। हामीलाई केवल पप-अप फारम कोड गर्न आवश्यक पर्दछ जुन ईमेलहरू स .्कलन गर्दछ र प्रयोगकर्ताको आईपी-आधारित जियोलोकेशन साझा गर्दछ तर यदि तपाईंसँग तपाईंको CMS प्लेटफर्ममा बाकस-बाहिर-बाकस छ भने, तपाईं त्यो चरण छोड्न सक्नुहुन्छ।
अभियानहरू सेट अप गर्न तपाईलाई निम्न प्लेटफर्महरू चाहिन्छ।
जियोलोकेशन वेब एपीआई
Zapier <> एरिस मौसम - स्वचालन एपीआई
खण्ड - ग्राहक डाटा प्लेटफार्म
भउचरिफाई गर्नुहोस् - पदोन्नति प्रबंधन सॉफ्टवेयर
ब्राज - ईमेल मार्केटिंग
Twilio - मोबाइल मार्केटिंग
यी सबै उपकरणहरूमा जनवरी २०२० सम्म नि: शुल्क परीक्षण उपलब्ध छ, त्यसैले तपाईं कुनै पनि सदस्यता लिनु अघि यो सेट-अप प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ।
हामीले दुई अभियान परिदृश्यहरू सिर्जना गरेका छौं - एउटा स्थानीय कम्पनीहरूका लागि र अर्को वैश्विक व्यवसायहरूको लागि। यहाँ केहि छोटो अवलोकन छ जुन तपाइँले पहिले उल्लेखित उपकरणहरू प्रयोग गरेर केहि घण्टामा सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ र के सबै चरणहरू सेट अप गर्न तपाईले कुन चरणहरू अनुसरण गर्नुपर्छ:
उदाहरण १: बर्लिन क्याफे - स्थानीय मौसम अभियान
यो बर्लिनमा क्याफेको लागि प्रचार अभियान हो। जाडो मौसमको सुरूमा, प्रयोगकर्ताहरूले टेक्स्ट सन्देश मार्फत दुई प्रचार कोडहरू प्राप्त गर्दछन् जुन हिउँ परेको खण्डमा मात्र उनीहरूले प्रयोग गर्न सक्दछन् (पहिलो कोड सक्रिय छ यदि तापक्रम -१15 डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि छ भने, अर्को यदि तापक्रम -१15 ° भन्दा तल छ भने सी) कुपनहरू असक्षम छन् वा दैनिक रूपमा स्वत: सक्षम हुन्छन्, बर्लिनको मौसम पूर्वानुमानको आधारमा जुन हामी हरेक दिन। बिहान एक जापियर अटोमेसन मार्फत जाँच्दछौं। कुपनहरू प्रति ग्राहक केवल एक पटक रिडिम गर्न सकिन्छ।
यहाँ पदोन्नति तर्क छ:
यदि बर्लिनमा हिउँ परिरहेको छ भने, -20% सार्वजनिक कुपन सक्षम गर्नुहोस्।
यदि यो हिउँ परिरहेको छ र तापक्रम बर्लिनमा -१° डिग्री सेल्सियस भन्दा तल झर्नुभयो भने, -15०% सार्वजनिक कुपन सक्षम गर्नुहोस्।
यदि यो हिउँ छैन भने दुबै प्रस्तावहरू असक्षम गर्नुहोस्।
यो प्रवाह हो जुन अभियानले प्रयोग गर्‍यो:
यी चरणहरू हुन् जुन तपाईले यसलाई सेट अप गर्न अनुसरण गर्नुपर्नेछ:
तपाईंको ग्राहक आधारलाई Voucherify मा आयात गर्नुहोस् (ग्राहक प्रोफाइलहरूमा स्थान र फोन नम्बर समावेश भएको निश्चित गर्नुहोस्)।
बर्लिन बाट ग्राहकहरु को लागी खण्ड बनाउनुहोस्।
अनुकूलन कोड ढाँचाको साथ -20% र -50% को लागी दुई एकल कोडहरू सिर्जना गर्नुहोस्।
Twilio एकीकरण मार्फत ग्राहकहरूसँग SMS मार्फत साझेदारी गर्नुहोस्। उदाहरण सन्देश यस्तो देखिन्छ:
Zapier मा जानुहोस् र AerisWeather साथ एक जडान निर्माण।
Zapier प्रवाह संग, एरिसवेदरलाई बर्लिन मा हरेक दिन बिहान7बिहान मौसम जाँच गर्न सोध्नुहोस्।
निम्न Zapier कार्यप्रवाह सेट अप गर्नुहोस्:
यदि मौसम सर्तहरू पूरा गरियो भने, जेपियरले भौचारिफाइलाई भउचरहरू सक्षम पार्न POST अनुरोध पठाउँदछ।
यदि मौसम सर्तहरू पूरा भएन भने, जेपियरले वाउचरलाई अक्षम गर्न POST अनुरोध पठाइन्छ।
उदाहरण २: एक अनलाइन कफी स्टोरको लागि ग्लोबल मौसम अभियान - यसलाई हिउँ पर्न दिनुहोस्
यो अभियान परिदृश्य विश्वव्यापी कम्पनीहरूका लागि हो जुन प्रयोगकर्ताहरू बिभिन्न स्थानहरूमा फैलिएका छन्। यस प्रवाहको साथ, तपाईं तिनीहरूको स्थानीय मौसम अवस्थाको आधारमा बिभिन्न शहरहरू र देशहरूका प्रयोगकर्ताहरूलाई लक्षित गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि यो हिउँ परेको छ भने, प्रयोगकर्ताहरूले नि: शुल्क थर्मसको लागि कुपन प्राप्त गर्नेछन्, यदि उनीहरूको अर्डर $० above भन्दा माथि छ भने भुक्तान योग्य।
यदि यो हिउँ परिरहेको छ र तापक्रम -११ डिग्री सेल्सियस भन्दा कम छ भने, प्रयोगकर्ताहरूले 15० डिग्री गिफ्ट कार्ड १०० above भन्दा माथि अर्डरहरूको लागि मान्य हुन्छ।
प्रति ग्राहक एक पटक छुटाउन योग्य।
कुपन वैधता प्रकाशनको सात दिन पछि।
अभियानको अवधिको लागि उपहार कार्ड वैधता (हाम्रो मामलामा ०१/०01/२०१० देखि /१/१२/२०२० सम्म)।
यस अभियानमा प्रयोगकर्ता यात्रा यस्तो देखिन्छ:
एक विज्ञापन (उदाहरणका लागि, गुगल वा फेसबुक विज्ञापन) भर्नको लागि फारामको साथ अवतरण पृष्ठमा जान्छ। फारममा, एक आगन्तुकले स्थान साझेदारी सक्षम गर्न र मौसम आधारित अभियानमा भाग लिनको लागि तिनीहरूको ईमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्न आवश्यक छ।
यदि प्रयोगकर्ता, उनीहरूको (ब्राउजर-प्रदान गरिएको) स्थानमा, फाराम भर्नको क्षणमा, मौसम सर्तहरू जुन अभियानमा निर्दिष्ट गरिएको छ, उनीहरूले क्रमशः कुपन वा गिफ्ट कार्ड पाउनेछन्।
कूपन वा उपहार कार्ड ब्राज ईमेल वितरणको माध्यमबाट योग्य प्रयोगकर्ताहरूलाई डेलिभर गरिनेछ। कुपनहरू / गिफ्ट कार्डहरू अभियानका नियमहरू (भउचरिफाइ द्वारा) को बिरूद्ध मान्य हुनेछ, र केवल ग्राहकहरू जसको अर्डरले पूर्व-सेट मापदण्ड पूरा गर्दछ, तिनीहरूलाई रिडिम गर्न सक्षम हुनेछ।
यो कसरी टेक्निकल दृष्टिकोणबाट काम गर्दछ?
प्रयोगकर्ता आउँछ अवतरण पृष्ठ र मार्फत उनीहरूको ईमेल र जियोलोकेशन जानकारी साझेदारी गर्न फाराम भर्दछ ब्राउजर एपीआई.
फारमले ग्राहक डेटा वेबकैक मार्फत Zapier मा पठाउँदछ:
जेपियरले सेगमेन्टमा डाटा पठाउँदछ।
खण्डले ब्राज र भउचरिफाइमा डाटा पठाउँदछ।
Zapier भू-स्थान जानकारीको आधारमा प्रयोगकर्ताको लागि स्थानीय मौसमको बारेमा एरिसवेदरलाई सोध्छ। त्यहाँ दुई सम्भावित मार्गहरू Zapier अनुसरण गर्नेछ:
यदि यो हिउँ परिरहेको छ र तापक्रम -१° डिग्री सेल्सियस भन्दा कम छ भने, तब:
Zapier ले Voucherify अनुरोध गरीएको मेटाडेटाको साथ पहिले सिर्जना गरिएको ग्राहक अपडेट गर्नका लागि: isCold: सही, isSnow: सही।
गिफ्ट कार्डहरूको गिफ्ट कार्ड वितरण स्वचालित हुन्छ, ट्रिगर हुन्छ जब ग्राहक सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रवेश गर्दछ। खण्डले ग्राहकहरूलाई भेला गर्दछ जो दुई मेटाडेटा आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ कोल्ड हो: साँचो र होस्सुन: सत्य।
यदि प्रयोगकर्ता स्थान मा हिउँ परिरहेको छ, र तापमान -१° डिग्री सेल्सियस माथि छ, तब:
Zapier ले Voucherify लाई मेटाडाटाका साथ ग्राहक अपडेट गर्न अनुरोध गर्दछ: isCold: गलत, isSnow: सही।
नि: शुल्क थर्मस छुट कोड वितरण स्वचालित छ, ट्रिगर भयो जब ग्राहकले सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रवेश गर्दछ। खण्डले ग्राहकहरूलाई भेला पार्नेछ जो दुई मेटाडेटा आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ कोल्ड हो: झूटो हो र बुझ्नुहोस्: सत्य हो।
यस अभियानको सेट अप गर्न तपाईंले लिनु पर्ने चरणहरूको सारांश यहाँ छ:
Voucherify मा ग्राहक मेटाडाटा सिर्जना गर्नुहोस्।
Voucherify मा ग्राहक क्षेत्रहरू निर्माण गर्नुहोस्।
दुई अभियानहरू सेट अप गर्नुहोस् - अनौपचारिक कुपनहरू र उपहार कार्ड भउचरिफिमा।
अनुकूलन विशेषता सुविधाको प्रयोग गरेर ब्राजको साथ स्वचालित वितरण तयार गर्नुहोस्।
फारामको साथ अवतरण पृष्ठ सिर्जना गर्नुहोस् ग्राहक जानकारी स collect्कलन गर्न र स्थान साझेदारी सक्षम गर्न एक बटन। (यहाँ तपाईंलाई ई-वाणिज्य प्लेटफर्म / CMS मा आउट-अफ-द-बाक्स छैन भने तपाईंलाई मद्दत गर्न एक विकासकर्ताको आवश्यक पर्दछ)।
फारमबाट आउँदै डाटा समेट्न खण्डको एकीकरण सेट अप गर्नुहोस् र यसलाई ब्राज र भउचरिफाइमा हस्तान्तरण गर्नुहोस्।
Zapier मा जानुहोस् र एरिसवेदर, सेगमेंट, र Voucherify प्लग-इनहरूको साथ एक zap सिर्जना गर्नुहोस्।
तपाईं स्वतन्त्र रूपमा हाम्रो अनौंठो व्यावसायिक लक्ष्यहरू पूरा गर्न फ्लो अनुकूलित गर्न सक्नुहुनेछ। माथिको प्रवाह मौसम स्थिति मान्यीकरणमा आधारित छ जब ग्राहकहरू अवतरण पृष्ठमा फारम भर्दछन्। तपाईं यस प्रवाहलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ त्यसैले मौसम स्टोरहरू तपाईंको स्टोरमा प्रोत्साहन मोचनको क्षणमा जाँच गरिन्छ। यस प्रकारको अभियानमा सबै ग्राहकहरूले प्रस्ताव प्राप्त गर्ने थिए तर यो पूर्वनिर्धारित मौसम अवस्थामा मात्र प्रयोग योग्य हुनेछ। यो तपाईमा निर्भर छ जुन प्रवाहलाई तपाईको आवश्यकतालाई अझ राम्रो सूट गर्दछ।
दुबै प्रचारहरू सेट अप गर्न को लागी धेरै सजिलो छ र निःशुल्क एपीआई-प्रथम समाधान प्रयोग गर्दछ जुन निःशुल्क परीक्षण प्रदान गर्दछ। तपाईं तिनीहरूलाई सेट अप गर्न सक्नुहुनेछ, केही दिनको लागि सुरूवात गर्नुहोस् र परिणामहरू हेर्नुहोस्, सशुल्क सदस्यता प्रतिबद्ध गर्नु अघि। यदि तपाइँ यसलाई सेट अप गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाइँ स्क्रिनसटहरूको साथ पूर्ण गाइड पढ्न सक्नुहुन्छ र दुबै अभियान परिदृश्यहरूका लागि चरण-देखि-चरण निर्देशनहरू। Voucherify.io २०० ओके म्यागजिन.
यी दुई अभियानहरू माथि उल्लेखित प्लेटफर्महरूको केवल एक प्रयोग केस हो। त्यहाँ धेरै अन्य, आउट-अफ-द-बक्स प्रमोशनहरू तपाईं यी र / वा अन्य API- पहिलो प्लेटफर्महरू प्रयोग गरेर निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ।
Voucherify.io को बारे मा
Voucherify एक एपीआई-प्रथम प्रमोशन मैनेजमेन्ट प्रणाली हो डिजिटल डिजिटल टोलीहरूको लागि जुन मार्केटि teams टोलीहरूलाई सान्दर्भिक कुपन, रेफरल, छूट, सस्ता, र वफादारी अभियानहरू छिटो प्रक्षेपण गर्न सक्षम गर्दछ।
Voucherify को साथ सुरू गर्नुहोस्
टैग: एरिस मौसमAPIब्राजकोडलेसभौगोलिक स्थानखण्डTwilioप्रमाणित गर्नुहोस्मौसममौसम बजारमौसम ट्रिगरzapier